Vaovao tsara ho an'ny tompona Apple Watch: efa an-dàlana SiriKit | Vaovao IPhone
Ianareo izay manana Apple Watch dia mety ho gaga amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, satria azontsika atao ny miantso an'i Siri amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny baiko "Hey Siri" na amin'ny alàlan'ny fanerena sy fihazonana ny satro-boninahitra Digital. Fa ny azontsika atao amin'ny Apple Watch sy Siri dia tsy misy ifandraisany SiriKit, SDK an'i Apple izay, ankoatry ny zavatra hafa, dia mamela antsika hifehy ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo amin'ny mpanampy virtoaly an'ny paoma.
Fanazavana fohy ny atao hoe SiriKit dia ny milaza izay ilaina mba handefasana WhatsApp mangataka amin'i Siri, na hanomboka fiofanana Runtastic amin'ny famantaranandro nefa tsy mila mandefa ilay fampiharana amin'ny tanana. Araka ny hitanao dia ho fanavaozana manan-danja izay efa Apple nanambara ho tonga eo akaikin'ny fandefasana ny watchOS 3.2, azo inoana fa ny kinova manaraka an'ny Apple's smartwatch operating system.
SiriKit dia hamela antsika hitantana ny fampiharana an'ny antoko fahatelo miaraka amin'ny feo avy amin'ny Apple Watch
watchOS 3.2 mbola tsy misy na ho an'ny mpamorona mba hitsapana azy, fa Apple kosa dia efa nanambara izay ho avy amin'ity kinova ity, a Maody teatra o Cinema Mode izay noresahintsika ora roa lasa izay. Amin'ity fampahalalana ity marina dia afaka mamaky izao manaraka izao koa isika:
watchOS 3.2 dia ahitana an'i SiriKit. Afaka mangataka amin'i Siri avy amin'ny Apple Watch ireo mpampiasa mba hamandrika mpandeha, handefa hafatra, handoa vola, na hanao fangatahana hafa izay zakan'ny fampiharana anao.
Ny rindranasa izay manome serivisy amin'ny sehatra manokana dia afaka mampiasa SiriKit hampiasana ireo serivisy ireo amin'ny alàlan'ny Siri amin'ny watchOS. Ny fanaovana ny serivisinao ho takiana dia mitaky fananganana fanitarana fampiharana iray na maromaro izay mampiasa ny rafitra UI Intents sy Intents. SiriKit amin'ny watchOS dia manohana serivisy amin'ireto sehatra manaraka ireto.
Raha hianatra ny fomba hanampiana ny fanohanana SiriKit ary hanome ny mpampiasa fomba vaovao hidirana amin'ny serivisinao, vakio ny SiriKit Programming Guide.
Raha tsy diso aho, ny lisitry ny karazana rindranasa izay afaka mampiasa SiriKit amin'ny watchOS dia lisitra mitovy amin'ny karazana rindranasa izay afaka mampiasa SDK mitovy amin'ny iOS amin'izao fotoana izao, noho izany Azontsika atao ny mangataka zavatra mitovy amin'ilay kinova Siri an'ny Apple Watch momba ny iPhone na iPad. Ny mazava dia ny WatchOS 3.2 dia ho fanavaozana lehibe izay hahita ny mazava amin'ny faran'ny volana martsa na ny voalohan'ny volana aprily. Mety ve ny fiandrasana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Vaovao tsara ho an'ny tompon'ny Apple Watch: Efa an-dalana i SiriKit
Ny vaovao rehetra ho entin'ny iOS 10.3